Nke na-The kasị Ụgbọ oloko na Europe na The World | Save A Train
Home > Travel Europe > Nke na-The kasị Ụgbọ oloko na Europe na The World
site udi 25/07/2018
Train njem Austria, Train njem Britain, Train njem France, Train njem Germany, Train njem Hungary, Train njem Italy, Train njem Portugal, Train njem Spain, Train njem Sweden, Train njem Switzerland, ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 15/09/2019)
Ò nwetụla mgbe ị chọrọ ileta Europe site ihe Devid agụghị ndị gbara, dị ka a ụgbọ okporo ígwè? Olee otú ọ na-ada na-eme njem ruo 300 Kilomita kwa hour? Europe nwere a nnukwu netwọk nke elu-ọsọ ụgbọ oloko ga-ewe gị ngwa ngwa ka ị na-aga. Akwa-agba ụgbọ okporo ígwè ọrụ naanị kwụsị na isi obodo. The ụgbọ oloko na-enye ala ugbala nke 1st na 2nd klas, nakwa dị ka ezi isi nri ọrụ. Ebe a bụ ihe ndị ọzọ banyere the fastest ụgbọ oloko na Europe.
The Alfa Pendular njem n'ụsọ oké osimiri dị Portugal, si Braga ka Faro na-akwụsị na Porto, Coimbra, na Lisbon. N'ihe na-erughị 6 awa, i nwere ike iru n'akụkụ nke ọzọ nke mba ahụ na-enwe magburu onwe ụlọ ọrụ na osisi.
Alvia ụgbọ oloko na Europe
The Alvia, Bụ Spanish kasị Ụgbọ oloko na Europe contender, -eme ogologo njem na gbapụrụ ọsọ nke ruo 250 Kilomita kwa hour. Ke adianade ejikọta isi obodo nke Spain, a ụgbọ okporo ígwè na-enye n'oge a eji enyere ndụ aka. Ndị bụ nnukwu eri oche karịa ohere nke ụkwụ, ịkpakọba table, na ọdịyo na video ndapụta.
ICE ụgbọ oloko na Europe jikọọ niile isi obodo na Germany na ọtụtụ obodo na mba ndị agbata obi. A nke oge a elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè na hour obula ọrụ awade a ọtụtụ: ihe ndị ọzọ, ugbala ntụ oyi, nnukwu ohere iji gbatịa ụkwụ, video ákwà na audio usoro. The ICE ga-ewe gị n'ebe ọ bụla Germany na akwa ụzọ gaa mba ndị ọzọ, dị ka Austria, France, na Switzerland.
akụ ụgbọ oloko (mabu dị ka Eurostar Italia) eme ka elu a na netwọk nke oge a elu-ọsọ na ha bụ Italian contender na kasị Ụgbọ oloko na Europe. Njem na Le Frecce na-enwe a ngwa ngwa njikọ ahụ obi ọtụtụ Italian obodo ndị dị otú ahụ dị ka Rome, Venice, Florence, Milan, Verona, na Naples. E nwere atọ ụdị nke Le Frecce ụgbọ oloko na obi sie gị ndị kasị ekwe omume njikọ bụghị nanị na ndị kasị ewu ewu obodo Italy kamakwa nke nta nke Italian obodo.
Eurostar bụ n'okpuru oké osimiri na-eto eto maka kasị Ụgbọ oloko na Europe
The Eurostar elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè bụ ihe kasị mma nhọrọ maka ejegharị ejegharị si London na Brussels ma ọ bụ Paris. Nke a ụgbọ okporo ígwè ga-ewe gị site na Channel Ọwara ka obi nke London. Travel mmiri n'okpuru osimiri mgbe ụtọ niile ntụsara a oge a elu-ọsọ ụgbọ okporo.
Ndị a elu-ọsọ ụgbọ oloko na-agba ọsọ n'etiti Austria, na Czech Republic, Germany, Hungary, na Switzerland. Railjet ụgbọ oloko na-ala-nke-na-art ụdị na-enye a nje ọgụ na njem ahụmahụ site na àjà elu-ọsọ ọrụ nkasi obi dị ukwuu. Nnukwu onboard ụlọ ọrụ na ndị magburu onwe ọrụ bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ. Gbapụrụ ọsọ nke ruo 230 kilomita kwa hour na-ahụ ruru. The Railjet-enye gị ohere ịga ofụri Austria nakwa mba ndị agbata obi dị otú ahụ dị ka Germany, Switzerland, na Hungary.
TGV – Bụ anyị ghota maka kasị Ụgbọ oloko Na Europe
Ịwa nile France na karịrị, TGV esetịpụ ụwa ọsọ ndekọ maka ot ụgbọ oloko. on 3 April 2007, TGV naa ruru 357.2 mph (574.8 km / h), eme ka ọ na-ise kasị ụgbọ okporo ígwè na Europe. TGV trainset ọbụna ruru 515.3 km / h (320 mph) n'okpuru pụrụ iche ule na ọnọdụ na mgbe akwusila site ọnọdụ ihu igwe dị ka oké foogu ma ọ bụ ndị ọzọ.
Train à Grande Vitesse ga-ewe gị na a ihunanya ụgbọ okporo ígwè njem na Paris ma ọ bụ n'ebe ọ bụla tinyere Mediterranean mben ọ bụrụ na ị ka, Biko. Zụrụ a TGV tiketi na-enwetaghị a nkiri na ụwa na-ama Cannes na-enwe mara mma ubi vaịn nke Loire Valley, emesia. Tinye a obere ihe njem gị na-agba ịnyịnya site na ịga na obodo ndị dị otú ahụ dị ka Marseille, Lyon, na Bordeaux.
Montpellier ka Marseille Ụgbọ oloko
Nice na Marseille Ụgbọ oloko
Paris na Marseille Ụgbọ oloko
Lyon ka Marseille Ụgbọ oloko
The SJ Swedish elu-ọsọ bụ otu n'ime ndị kasị ụgbọ oloko na Europe na-e kpọmkwem maka Scandinavian teren na-agba ọsọ na a ọsọ nke ruo 200 Kilomita kwa hour. Ndị a ụgbọ oloko na-enye a elu larịị nke nkasi obi na-ekwe ka ị na-eme njem ngwa ngwa na etiti nke ọtụtụ Swedish ukwu ndị dị ka Stockholm, Gothenburg, na Malmo. Ndị a elu-ọsọ ụgbọ oloko nwekwara njem ozugbo Copenhagen (Denmark) via ndị fọdụrụ n'ezinụlọ ụzọ na okporo ígwè akwa na Europe, na ikpọ Öresund Bridge.
New na Devid agụghị ndị gbara na otu - kasị ụgbọ oloko na Europe na-enye na-ekwe omume. Họrọ a ụgbọ okporo ígwè si ndepụta n'elu na anyị ji n'aka na ị ga-enwe ị.
Ị nwere ike akwụkwọ gị ụgbọ oloko tiketi n'etiti kasị ụgbọ oloko na Europe na Zọpụta-A-Train ka fọrọ nke nta ọ bụla na-aga kpọọrọ n'elu 3 nkeji, na ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè udu na napụla asọ anyị oyi ntinye akwụkwọ ụgwọ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/which-are-the-fastest-trains-in-europe-and-the-world/- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe en_ ka _de ma ọ bụ _it na ndị ọzọ asụsụ.
#fasttrains #highspeedtrain ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel
ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ 1
Train njem Sweden, Travel Europe 0